Webtalk ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (Bon အတွင်းအပိုဆု 2020) XNUMX - 💌 WebTK - Your Ticket to WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
Webtalk တစ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်သာဆန်းသစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသီးသီးရဲ့ Facebook, LinkedIn တို့နှင့်အမေဇုန်နှင့်အတူတူညီသည့်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကွန်ရက်။ တစ်ဦးမက်လုံးပေးအဖြစ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှု Affiliate Program ကိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုအသစ်မွေးဖွားလူမှုမီဒီယာများအတွက်ရေခဲတောင်၏ရုံအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်!: နှင့်အတူ ကြော်ငြာရေကန်ဆုလာဘ်များလွှတ်ပေးရေးယခုတွင်လူတိုင်းကသူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ငွေသားများရနိုင်သည် Webtalk။ ပိုပြီးတိကျစွာပြောရမယ်ဆိုရင် Webtalk သင်၏လှုပ်ရှားမှု၊ သင်၏နောက်လိုက်များ၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်သင်၏ရည်ညွှန်းမှု၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အကန့်အသတ်မဲ့ကြော်ငြာကော်မရှင်များကိုပေးသည့်ပထမဆုံးလူမှုမီဒီယာဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Webtalk ပလက်ဖောင်းယခုအကြောင်းကို 8 နှစ်ပေါင်းပါရမီ developer များတစ်စုကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ features တွေတစ်ခုလုံးကိုဖုံးကွယ်, အဆင့်ဆင့်အတွက်ဖြန့်ချိနေကြပါတယ် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ ပလက်ဖောင်း၏။
ပြီးနောက် Webtalk Beta ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူ ဦး ရေသည်များပြားလာခဲ့ပြီးမတ်လ ၂၀၂ တွင်လည်း Webtalk ယင်း၏ beta ကိုစမ်းသပ်အဆင့်ဆင့်ခန့်4သန်းအသုံးပြုသူများကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
အသုံးပြုသူများသည်ဟုဆို Webtalk အချို့သောအခြားလူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းထက်သာလွန်ထုံးစံ၌ဆက်သွယ်မှုကိုကြီးကြပ်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ကြောင့်ယခုဆိုလူမှုရေးမီဒီယာကကမ်းလှမ်း၏အဖြစ်မဟုတျကွောငျး data တွေကို share ဖို့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် Webtalk အကောင့်, ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာမှစံပြပါလိမ့်မယ်:
အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးအကျိုးရှိသောနည်းလမ်းနှင့်အတူလာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည် Webtalk Stars Teamဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရန်အများအပြားအားသာချက်များကို add ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Webtalk တစ်ဦးနှင့်တူအဖွဲ့ဝင်, အသက်အဘို့အ 50% အဖွဲ့သည်ဝင်ငွေဝေစု 🤑 (ဒါကမင်းရဲ့အပိုဆုကြေးပါ။ ) ။ နှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်ရန်အတွက် Webtalk Stars Team, ကလစ် ဒီမှာ သင့်အားမည်သူဖိတ်သည်ကိုမေးမြန်းသည့်အခါ“ STAR” ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင်၏ဖိတ်ကြားချက် link ကိုသင်ရပြီးပြီနှင့် signup စာမျက်နှာရှိ link ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်အမည်, အီးမေးလိပ်စာ, မိုဘိုင်းနံပါတ်, နှင့်ရက်စွဲများ၏မွေးဖွားအတွက်ဖြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဒေတာကိုအတည်ပြုသင်ပေးထားသောအီးမေးလ်ဆိုကြသည်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်စံချိန်ဒေတာကိုသင်ပို့, ဒီစိစစ်အတည်ပြုအကောင်းဆုံးချက်ချင်းပြုမိကြောင်းအာမခံပါလိမ့်မယ်။
ဒီကပိုရိုးနှင့် ပို. ပို. လက်တွေ့ကျသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အတူပေါင်းသင်းစေသည်အဖြစ်သင့်ကိုမှန်ကန်အမည်များကိုမှတ်ပုံတင်ဘို့လိုအပ်သည်။ အချို့သောအမည်ဝှက်အတုသို့မဟုတ်လှည့်ဖြားမှတ်တမ်းများဖန်တီးခြင်းမှတစ်ဦးချင်းစီကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးဖို့ပိတ်ပင်ထားခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
အခုတော့ရဲ့အချို့ကိုကြည့်ပါစေ Webtalk'' s ကိုအများဆုံးဆန်းသစ် features တွေ:
သငျသညျမှာနိုင်သလား Webtalk အဖွဲ့များထဲသို့ကိုယ်တော်၏ဆက်သွယ်ရန်စီစဉ်
Facebook အမှာ, သငျသညျမိသားစု, သူငယ်ချင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆက်အသွယ်ခွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ Facebook ကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်နှင့်အတူသင့်မိသားစုဓါတ်ပုံတွေကိုဝေမျှဖို့ရည်ရွယ်ကြဘူးလျှင်တကယ်နာကျင်ကျိန်းစပ်ဖြစ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းအမျိုးအစားပေါ်တွင်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အသီးအသီးစောင့်ရှောက်။
At Webtalk သငျသညျသူငယ်ချင်းမိသားစုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအအသားအရောင်ခွဲခြားအသုံးပြုပုံကိုသင်စေနိုင်သည် Webtalk သင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအဘို့ - - Facebook မှာအလားတူနှင့် LinkedIn - သင့်လိုလားသူအဆက်အသွယ်ဘို့ - တဦးတည်းအစက်အပြောက်အတွက်.
သင်ပင်ကိုလည်းသင်ရှာဖွေ tags များနှင့်အတူသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စီစဉ်နိုငျ client ကို, မိတ်ဖက်, service provider က, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စသည်တို့ကိုမှထပ်မံသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်ခွဲခြားရန်ပေါ်သွားနိုင်ပါတယ် ..
သငျသညျမှာနိုင်သလား Webtalk သင့်ရဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်ကိုထိန်းချုပ်
Facebook အမှာ, သင်သည်သင်၏ Newsfeed ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်, နှင့်မကြာသေးမီက, ကြော်ငြာများတစ်ခုအစဉ်အဆက်ကိုတိုးမြှင့်အရေအတွက်က Facebook Newsfeed ကိုအတွက် fused နေကြသည်။ သင်သည်သင်၏ Facebook က timeline ပေါ်မှာ share မည်သို့ပင်သငျသညျလွတ်လပ်စွာမြင်ရနိုင်သူညွှန်ပြလျှင် မှလွဲ. သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသီးအသီးမှ unhidden ဖြစ်ပါတယ်။
နှင့် Webtalk နှင့်၎င်း၏ Newsfeeds မူပိုင်ခွင့်, သငျသညျစသညျ, သာသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ပဲသင်၏အပေါင်းအဘော်, စီးပွားရေး-related ပို့စ်များကိုမှအပေါင်းအသင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-related ပို့စ်များကိုသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိက-related ပို့စ်များကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်
သငျသညျဒါ့အပြင်, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ tags များပါဝင်သည်ရုံကဗီဒီယိုပို့စ်များကိုရနိုင် - မှကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာအသုံးချရန် သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါအလိုရှိအတိအကျအဘယ်အရာကိုရုပ်သံလိုင်း.
ကအားလုံးကိုသင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဆိုရင်သို့မဟုတ်သင့်လိုချင်သောအလုပ်အနေအထားရဖို့အထူးသဖြင့်လျှင်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရရှိသွားတဲ့နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ သင်ဤဆန်းသစ်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းများ၏ Affiliate အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဤပရီမီယံအင်္ဂါရပ်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသတိပြုပါသင့်တယ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆုလာဘ် packages များ.
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ပြီးသားအခြားလူမှုရေးပလက်ဖောင်းများတွင်မတွေ့ရှိသောဤပလက်ဖောင်းနှင့်ဆက်စပ်မူထူးခြားတဲ့ features တွေဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်တဲ့အခါမှာဒီပလက်ဖောင်းမှာ "ပရီမီယံ" ဟုချေါခံရထိုက်တန်သော features တွေအံ့သြစေခြင်းငှါ။ အောက်ကပုံပရီမီယံအစီအစဉ်များကိုပူဇော်ဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုအခြေခံအားဖြင့်ပြသထားတယ်:
တစ်ဦးလိုလားသူအဖွဲ့ဝင်များအတွက်စျေးနှုန်းကအလွန်ယှဉ်ပြိုင်စေသည်ရာ LinkedIn တို့၏ထက်ဝက်ခန့်တကြောင်းသတိပြုပါ။
Webtalk မကြာသေးမီကအသစ်သော features တွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်း beta ကိုစမ်းသပ်လက်ရှိဖြစ်ပြီး, အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များအစဉ်အမြဲမေလတွင်3၏အဖြစ်က၎င်း၏ 2019 သန်းသည်အသုံးပြုသူများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှကြေညာခဲ့သည်။ ဤအပျေါလှငျ၏အဘို့ကိုပါဝင်သည်:
သတင်းကဏ္ဍ (ကော်ပိုရိတ် site ကို)
SOCIALCPX (ရည်ညွှန်းဆုများ) Affiliate Program ကို)
Webtalk'' s ကို Self-service ကိုကြော်ငြာပလက်ဖောင်း
Webtalk အနုပညာရှင်တွေ & စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စာမျက်နှာများ
Webtalk မိုဘိုင်း App များ
Webtalk Verify - blockchain ပေါ်တွင်တည်ဆောက်တစ်ဦးက Universal ID ကိုယုံကြည်ကိုးစားမှုရမှတ်
အလွတ်တန်း - သင့်အနေဖြင့်သင်၏အချိန်ကိုရောင်းမယ့် tool တစ်ခု Webtalk ပရိုဖိုင်းကို
စတိုးဆိုင်များ - သင့်အနေဖြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းဖို့ကိရိယာတခု Webtalk စာမျက်နှာ
အဆိုပါ Webtalk မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ရှာဖွေရေးနည်းပညာစွမ်းအားဖြင့် Marketplace, - နေရာချထားခြင်းနှင့်ငှားရမ်းမည်သည့်အလုပ်သမား / ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်သင့်ကွန်ယက်တွင်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအသုံးပြုသူများထံမှမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူ
အများကြီးပိုပြီး features တွေ...
Webtalk Affiliate Program ကို - SocialCPX ရှင်းလင်းချက်
Webtalk'' s ကိုတည်ထောင်သူ SocialCPX လို့ခေါ်တဲ့ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအကျိုးအမြတ် Affiliate Program ကိုမှတဆင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေတဝက်အထိဝေမျှဖို့ကတိပြုခဲ့ကြသည်။ အမြင့်ဆုံးကြိုးအစီအစဉ် (ဒါခေါ် "1 သန်းဆုကြေးငွေ") များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူကို beta-affiliates ဝင်ငွေ၏ 10% ရရှိမည် အစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့လွှဲပြောင်းကွန်ယက်၏5သားစဉ်မြေးဆက်ကထုတ်လုပ်။ Beta ကိုပိတျထားပြီးနောက် join လိမ့်မည်ဟုအဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းသာသူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းထံမှ 10% ဝင်ငွေဝေစုရပါလိမ့်မယ်။
သင်ဤသုံးပြီးသင့်ရဲ့အလားအလာင်ငွေခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် များအတွက်အဆင့်မြင့်ဝင်ငွေဂဏန်းတွက်စက် Webtalk။ သငျသညျသငျနှငျ့အတူတတ်နိုင်သမျှသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် Webtalk ရုံကွန်ယက် 20 လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတစ်လလျှင်တထောင်အများအပြားဒေါ်လာစျေးဝင်ငွေ။
သင်က 5-tier Affiliate အခွင့်အလမ်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ရန်အတွက် beta ကိုစဉ်အတွင်း join ဖို့သငျသညျအားပေးကြသည်။ သေချာဘို့ဤတစျဦးဖွစျသညျ Webtalk'' s ကိုယှဉ်ပြိုင်ကျော်အဓိကအားသာချက်။
တချို့ကအကောင်းအဆိုး cons အကြောင်းကို Webtalk:
၏ Pros Webtalk
ဒါဟာ join ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Webtalk ပလက်ဖောင်းသက်သေပြအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်ကြိုက်များစွာသောသဘောတူညီချက်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါတည်ထောင်သူပလက်ဖောင်းအပေါ်အလွန်တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်နှင့်အသစ်အသုံးပြုသူများကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဗီဒီယိုကိုလဲ tutorial နှင့်ပို့စ်များကိုပေးသည်။
သင်က join လို့ရပါတယ် Webtalk Affiliate Program ကို - SocialCPX - အခမဲ့ဖြစ်သည်။ တစ်သက်တာ 10% ၀ င်ငွေ၏အမြတ်အစွန်း (beta partner များအတွက်)5လွှဲပြောင်းမှုအဆင့်ဆင့်မှတစ်ဆင့်ရက်ရောစွာကျိုးနပ်ပါသည်။ လက်ရှိအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လက်ရှိရှိ MLM အဖွဲ့အစည်းများသည်တစ်လမှတစ်လကုန်ကျသည်။
၏ Cons Webtalk
ဒါဟာ Beta ကို Mode ကိုဆဲဖြစ်ပါသည်, ဤလိုက်လျောညီထွေသင်နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ရတိကျစွာအဘယ်အရာကိုညွှန်ပြမထားဘူး။
အနည်းငယ်သော့ချက် features တွေအတွက် Beta ကိုဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်မရှိကြပေ။
ဒီလူမှုရေးပလက်ဖောင်းအကြာတွင်တခုတခုအပေါ်မှာအောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကဒါဟာပြည်နယ်မှစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါသည် - ကသံသယမရှိနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အချို့ပြီးသားထူထောင်ပလက်ဖောင်းနဲ့အလွန်အမင်းအပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
Is Webtalk စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှု?
Webtalk Facebook က, Google+ မှာ, Pinterest, ထိုသို့ထူးခြားသောနှင့်အမှန်တကယ်စစ်မှန်သောစေအမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးပလက်ဖောင်းကျော်2နိယာမအားသာချက်ရှိပါတယ်:
သငျသညျ Facebook ပေါ်တွင်သင်၏ဓါတ်ပုံများ, ပို့စ်များ, စသည်တို့ကိုမျှဝေပေးသည့်အခါသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့သူတို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်ရုံသင့်မိသားစုမှပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းအနည်းငယ်ဓါတ်ပုံတွေရှိတယ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်, သင်ကြည့်ရှုရန်သင့်မန်နေဂျာမလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်ဖြစ်ကောင်းသငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးရသောသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါင်းအသင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့လိုအပျကွောငျးရေးသားချက်များရှိပါတယ် ကြည့်ရှုရန်သင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျိန်းသေနှင့်အတူအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည် Webtalk.
ဒါဟာ Facebook နှင့် Google ကသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများခွဲဝေကြောင့်အဘယ်သူမျှမအစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကြော်ငြာများမှဒေါ်လာဘီလျံနှင့်ချီဝင်ငွေဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးလူသိများတဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်။
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဤသည်သင်၏ကတိကဝတ်ခြင်းမရှိဘဲ, သငျသညျ (သင်ပလက်ဖောင်းမှသငျနှငျ့အတူတလျှောက်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများစေသောအခါ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ပို့စ်များကို '' နှင့်တူ 'ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း) (သင်ကမျှဝေသောပို့စ်များကိုများနှင့်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ) ကို feeds တွေကိုနှင့်အသွားအလာလုပ်နေပါတယ်, စဉ်းစား လူမှုရေးပလက်ဖောင်းမှကြော်ငြာမှလူများအဘယ်သူမျှမစုဝေးရှိရလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်တို့သည်အလျှင်းမရ! မ Dime! ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်တို့သည်အလျှင်းမများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်! Webtalk အတိအကျဤကိစ္စကိုနားလည်နှင့်ဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်.
On Webtalkသင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်အဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုကိုလက်ခံသောအခါ, သငျသညျသူ့ကိုတံဆိပ်ကပ် / သူမ၏ချိတ်ဆက်မှုအရာမျိုး, သူ / သူမနေရာတစ်နေရာ (မိသားစု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ, အပေါင်းအဘော်, etc) ရှိပါတယ်ရန်။
သင်တစ်ဦး post ကို share တဲ့အခါမ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, သငျသညျလူများ၏အမျိုးအစားကဒီဒေတာကိုတင်ပြခြင်းနှင့်အရာမဟုတ်ပါလိမ့်မည်သည့်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ယင်းကိုအဘယ်သူ Are Webtalk တည်ထောင်သူ?
Webtalk တည်ထောင်သူ RJ Garbowicz (CEO ဖြစ်သူ), အင်ဒရူး Peret, Basit ဟူစိန်, Jeff Catherell နှင့်ဂျေမီနိုင်အောင်ရှိပါတယ်။
အဆိုအရ မိမိအပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာ, RJ Garbowicz တည်ထောင်သူ, CEO နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည် Webtalkသူ 2011 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအရာ။ RJ ထုတ်ကုန်မဟာဗျူဟာနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ခြုံငုံဦးတည်ချက် setting များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သူ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဦးဆောင် Webtalk'' s ကိုထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။
RJ နှစ်ခုထွက်ပေါက်နှင့်အတူလေးယခင်နည်းပညာကုမ္ပဏီများကစတင်ပြီးလျှင်တစ်ဦးအမှတ်စဉ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူစိန့်ပီတာစဘတ်ကောလိပ်မှာက web design ကိုလေ့လာခဲ့နှင့် IL ကြည်းတပ်အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိရိယာများအားရေဒါနည်းပညာရှင်အဖြစ်မိမိတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် Webtalk ဖန်တီးခဲ့ ... RJ Garbowicz ကိုးကား. :
Webtalk ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်အောင်မြင်မှုဖန်တီးဖို့ပို tools များနှင့်အတူလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပေးခွငျးဖွငျ့ဤမစ်ရှင်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါရန်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Webtalk ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များ (10% ပေးသည် Webtalk ကမ်ဘာတစျဆငျ့ကိုပိုမို non-profit ကုမ္ပဏီများမှ start ကိုကူညီအမြတ်အစွန်း) Webtalk ဖောင်ဒေးရှင်း (အသေးစိတျအဘို့ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ) "
ဤအချက်များကိုတစ်လျှောက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ Webtalk တစ်ဦးက Facebook, LinkedIn တို့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေနှင့်အမေဇုံအတူတကွသွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
Webtalk ကျနော်တို့အဘို့တမ်းတခဲ့ဖူးတဲ့ features တွေဖို့အဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လူမှုရေးမီဒီယာကုမ္ပဏီကြီးများကငြင်းဆိုလျက်ရှိသည်။ ဤသည်ဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုတစျခုပလက်ဖောင်းသို့အတူတကွဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းအားအားလုံးနီးပါးရှုထောင့်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီပလက်ဖောင်းလာရောက်ပူးပေါင်းသင်ကဲ့သို့ရှည်လျားသငျသညျက၎င်း၏လွှဲပြောင်းအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်အဖြစ်ရရှိစေဖို့လိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဤပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ထင်ကြသနည်း အောက်ပါသင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုစွန့်ခွာ ...
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇူလိုင်လ 6, 2020
Is Webtalk မင်းအချိန်ကုန်လား Ponzi အစီအစဉ်အသစ်လား။ တရားဝင်လား၊ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့အတိအကျဘာလဲ Webtalk?
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk reviews Tags: Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Bitcoin, ဘလော့ hosting ဝန်ဆောင်မှုတွေကို, ရပ်ရွာက်ဘ်ဆိုက်များ, Facebook အများ၏ဝေဖန်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, Facebook က, LinkedIn တို့, Microsoft က, Outlook.com, ဓာတ်ပုံဝေမျှခြင်း, Pinterest, ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, ရည်ညွန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, လူမှုစီးပွားကူးသန်း, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, social networking service ကို, လူမှုကွန်ယက်, အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေး, ဝတ္ဆုိက္မ်ား , Webtalk, Webtalk beta ကို, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave post navigation
SCDA TOGO: မင်းသေချာတာပေါ့၊ Webtalk စာမျက်နှာ! 😍
Work People ပြီးနောက် Webtalk စာမျက်နှာ! 😍
ပင်မစာမျက်နှာ - Webtalk reviews - Webtalk ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (inside အတွင်းအပိုဆု💰) 2020